Kodzero-dzevanhu, 30 Chivabvu 2017 page 1
Chipiri 30 Chivabvu 2017
Chivabvu 25, 2017
Zimbabwe Yocherechedza Zuva reAfrica Day
Zimbabwe nemusi weChina yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupemberera kusungunuka kwenyika dzemuAfrica kubva pajoki rehuranda hwehudzvinyiri kana kuti Africa Day.
Kanzuru yeHarare Yopikisa Mutongo Unorambidza Kuvharwa kweMvura
Kanzuru yeguta reHarare yazivisa kuti iri kupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court svondo rino wekurambidza kanzuru kuvhara mvura yevanhu vanenge vaine zvikwereti kukanzuru senzira yekuvamanikidza kubhadhara zvikwereti zvavo.
Mapato Anopikisa Oshora VaMphoko
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira, VaSydney Chisi, vanoti zvave pachena kuti hutungamiri hweZanu PF hauzofe hwakatevedzera mitemo yenyika uye mitemo iyi haizoshandiswa zvakaenzana pakati pevari muZanu PF nemapato anopikisa.
Vana veZimbabwe Vari Kunze kweNyika Votyiswa neZviitiko zveHugandanga
Zvichitevera kuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevaviri uye kukuwadzwa kwevamwe vanodarika makumi mashanu nemusi weMuvhuro kuManchester kuUnited Kingdom, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvave kugara zvakabatira hana mumaoko.
Zanu-PF Yoongorora Mhirizhonga Yakaitika muBulawayo?
Bato reZanu PF rinoti richaongorora mhirizhonga yakaitika kuBulawayo nemusi weSvondo iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara.